Igbo, John: Lesson 058 - Mmehie bu ohu (Jọn 8:30-36) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 058 (Sin is bondage)
e) Mmehie bu ohu (Jọn 8:30-36)
30 Ma mb͕e Ọ nēkwu okwu ndia, ọtutu madu kwere na Ya. 31 Ya mere Jisus siri ndi-Ju ndi kwere Ya, Ọ buru na unu anọgide n'okwum, unu bu ndi nēso uzọm n'ezie. 32 I gāmara kwa ezi-okwu, ezi-okwu ahu gēme kwa ka i pua.
Àmà dị umeala n'obi nke Kraịst nwere ma emetụta ọtụtụ ndị gere ntị. Ha chọrọ ikwere na ya dịka onye si n'aka Chineke. Jizọs chere na ha tụkwasịrị ya obi ma nakweere ịdị njikere ha ịṅa ntị. Ọ gbara ha ume ka ha ghara ikwere Oziọma Ya, kama ichebara okwu ya ma sonyere ya, ka ha wee dịrị na ya, dịka alaka ụlọ ọrụ vaịn ahụ; ka Mmụọ ya wee daba n'obi ha na n'echiche n'enweghị ihe mgbochi; iji wepu ha iji mezuo uche ya na omume. Onye obula nke nemezu okwu nke Kraist dika nka, nekwu eziokwu. N'ihi na eziokwu abụghị naanị iche echiche, kama ọ bụ ihe bara uru nke anyị na-ekere site na omume nke ndụ anyị.
Eziokwu Chineke bụ okwu niile nke nwere obi eziokwu na amamihe; nke abuo bu ima Chineke dika Nna, Okpara na Mmuo Nso n'idi n'otu nke ihunanya na mgbalị. Ka anyi na-agbanye n'ime Kraist, anyi na-amata oke mma nke Atọ n'Ime Otu.
Ịmara Chineke na-agbanwe ndụ anyị. Anyị maara Chineke ruo n'ókè anyị hụrụ ndị ọzọ n'anya. Onye na-adịghị ahụ n'anya amaghị Chineke. N'ịmara Chineke site n'okwu Kraịst, a tọhapụrụ anyị na ịchọ ọdịmma onwe onye. Ikwu banyere ncheghari ma obu iwu ndi iwu nyere ayi agagh eme ka ayi nwere onwe ayi site n'ohu nke nmehie; kedu ihe ga-abụ ịmara ịhụnanya nke Chineke, ịnakwere mgbaghara Ọkpara, na ọbịbịa nke Mmụọ Nsọ n'ime ndụ anyị. Ịhụnanya nke Chineke bụ ihe nwere ike imebi agbụ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị na ego.
33 Ha zara Ya, si, Ayi bu nkpuru Abraham, ọ dighi kwa onye ọ bula ayi bu orù. Ùnu si aṅa si, Agāgapu unu? 34 Jisus zara ha, si, N'ezie asim unu, Onye ọ bula nke nēme nmehie bu orù nke nmehie. 35 Onye na-eje ozi anaghị ebi n'ụlọ ruo mgbe ebighị ebi. Nwa nwoke na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. 36 Ya mere, ọ bụrụ na Ọkpara ahụ emee ka unu nwere onwe unu, unu ga-enwere onwe unu n'ezie.
Ndị Juu nọ ná mgbagwoju anya; ndi nna nna ha biri ndu ariri nariri mgbe ha no n'agbu Fero n'Ijipt, ha we neche na onwe ha nwere ike nke Chineke, ebe O mere ka ha si n'gba ohu ahu puta (Opupu 20: 2). N'ihi ya, okwu Jizọs kpasuru ha iwe mgbe ọ gọrọ na ha nwere onwe ha.
Jizọs ghaghị ịkatọ mpako nke ndị malitere ịkwenye na ya. O gosiri ha na ha bụ ndị ohu nke mmehie, na ndị Setan dọtara n'agha. Ọ bụrụ na anyị aghọtaghị ibu arọ nke agbụ anyị, anyị agaghị achọ ogologo nzọpụta. Onye maara onwe ya na ya agaghị enwe ike imeri mmehie ya bụ onye ga-arịọ Chineke ka ọ zọpụta ya. N'ebe a anyi huru ihe mere otutu ndi mmadu achoghi acho Jisos; ọ bụ na ha chere onwe ha adịghị mkpa nzọpụta ya.
Jizos kwusiri ike, "Onye obula n'emehie, obu ohu nke nmehie. Otutu nwa okoro na-amalite ndu ya na okwu ugha, sloth, na ihe omuma. Ha na-agbanye aka n'omume ha ma mee ya ruo mgbe ọ ghọọrọ ha àgwà. Mgbe ha ghọtara ihe rụrụ arụ na obi ọjọọ ma nụ ụda akọnuche ha, oge ahụ agafeela, ha bụzi ohu nke mmehie ha. eme ihe ojoo n'amaghi oke, ha gekwuo oge awa ha malitere ige nti echiche ojo ha. Ndi mmadu abiawo ihe ojoo, obu ezie na ha zochie ihe ojoo n'azu ihe ndi n'echebe ezi ofufe dika onye obula. Setan na-egwuri egwu na ntamu ha dị ka oké mmiri ozuzo na akwukwo ahihia.
Mgbe ahụ, Ọkpara Chineke kwupụtara okwu eze ya, "Ugbu a ka m nọnyeere gị ma mara njikọ gị, enwere m ike ịkwapụ gị ma kpochapu mmehie gị. Ọ bụghị maka ngbanwe dị elu nke ụwa, ma ọ bụ ịdọ gị aka ná ntị na iwu siri ike Ee e, m na-achọ ịtọhapụ gị n'aka ike nke mmehie na ike nke ọnwụ na ikike ndị Setan kwuru maka ya. M ga-emegharị gị, mee ka ị dị ndụ, ka ike nke Chineke n'ime gị wee bụrụ ihe ngwọta O doro anya na Setan ga-anwale gị n'ọtụtụ ụzọ. Ị ga-asụ ngọngọ, ma ọ bụghị dị ka ndị ohu, kama dị ka ụmụaka na-ejide ikike gị."
"A gbapụtara gị ruo mgbe ebighi ebi, ọbara m akwụ ụgwọ, zụtara gị n'ahịa nke mmehie, ị bụ onye pụrụ iche nye Chineke, o nyere gị nnwere onwe ka ị bụrụ ụmụ nwere onwe gị. ozi na ekele n'amara onwe ya: Abụ m onye nzọpụta nke na-anapụta gị n'ụlọ mkpọrọ nke ikpe ọmụma na mpaghara nke Chineke. Abụ m Ọkpara Chineke, na-enwe ikike ịhapụ ndị niile na-ege ntị n'olu m."
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-efe ma na-eto gị, n'ihi na ị bụ Onye Nzọpụta zuru oke, onye n'obe wepụtara anyị n'ikpeazụ site n'aka ọchịchị Setan. I b͕aghara njehie nile ayi. Ị na-eme ka anyị dị ọcha ka anyị wee ghara ịbụ ndị ohu nke ilu na ịkpọasị, ma na-ejere Chineke ozi dị ka ụmụ nwere onwe na ịṅụrị ọṅụ
Olee otú anyị nwere ike isi tọhapụ anyị n'eziokwu?
NNYOCHA - 3
zitere anyị azịza ziri ezi maka 17 n'ime ajụjụ 19 a. Anyị ga-ezitere gị usoro ihe ọmụmụ a.
Gini bu ihe omimi nke inye ndi mmadu ise?
N'ihi g in i mere Jisos ji ghara ikpu eze eze n'oche eze?
Olee ot'u Jisos si duputa ndi mmadu site na ochicho maka nri nye okwukwe nime onwe ya?
Gịnị ka "achicha nke ndụ" pụtara?
Olee otú Jizọs si meghachi omume ná ntamu nke ndị na-ege ya ntị?
N'ihi gịnị ka Jizọs ji gwa ndị na-ege ya ntị na ha aghaghị iri ahụ ya ma ṅụọ ọbara ya?
G in i ka ihe Pita na-agba p utara?
N'ihi gịnị ka ụwa ji kpọọ Jizọs asị?
Gini bu ihe negosi na ozioma sitere na Chineke?
Gịnị kpatara Jizọs ji bụrụ onye naanị ya maara Chineke n'ezie?
Gịnị kpatara Jizọs ji kwuo, "Ọ bụrụ na onye ọ bụla akpịrị na-akpọ nkụ ka ọ bịakwute m ṅụọ mmiri?"
N'ihi gịnị ka ndị nchụàjà na ndị Farisii ji leghara ndị nkịtị anya?
Gịnị mere ndị na-ebo onye ahụ na-akwa iko ji hapụ ọnụnọ Jizọs?
Didie ke ntiense Jesus ke idemesie nte un̄wana ererimbot abuana ye ifiọk Ete eke eluigwe?
Gini ka okwukwe nime Onye kpoturu onwe ya "Mu onwem bu"?
Olee otú Jizọs si kwupụta na ya nọgidere n'Atọ n'Ime Otu?
Olee otu anyi puru isi zoputa n'ezie?